I-Apple iya kuba neeofisi eSan Francisco, ezinabasebenzi abangama-500 | IPhone iindaba
I-Apple iya kuba neeofisi eSan Francisco, ezinabasebenzi abangama-500
Ngelixa umsebenzi uqhubeka kwi-Apple Campus, ekulindeleke ukuba igqitywe ngaphambi kokuphela konyaka, u-Apple usandula ukuqasha indawo yeofisi eSan Francisco ukulungiselela abantu abamalunga ne-500. Njengoko sinokufunda kwiReuters, iApple iceba ukuvula le ndawo intsha yeofisi yenye yezona ndawo zibiza kakhulu eSan Francisco.
Indawo yeofisi eza kuvulwa yiApple kulo nyaka iya kuba nendawo ephantse ibe ngama-24.000 eemitha zesikwere. Imigangatho emibini yesakhiwo seofisi iApple eyiqeshileyo, ibihleli kude kube ngoku yi-CBS, apho ibirekhodile iinkqubo ezininzi ngenxa yophahla oluphezulu, iindawo ezinamacala amdaka kwaye imigangatho iphantse yafana.
Izizathu zika-Apple zokuvula iofisi eSan Francisco, iikhilomitha ezingama-46 ukusuka kwindawo yeCupertino hub zinokuba mbini. Ithiyori yokuqala ithi I-Apple ifuna indawo ethe kratya yokuhlala abasebenzi beBeats Music kunye nenkampani ye-analytics yeTopsy Labs, esithethe ngayo kuwe ngokukhawuleza. Zombini ezi nkampani zizinze eSan Francisco, kodwa umbono ka-Apple kukugxila kuzo zombini iinkampani kwikomkhulu elinye endaweni yokuzihambisa ziye eCupertino.
Esinye isizathu sokuba iApple irente le ndawo intsha yeofisi iya kukhuthazeka Ukutsala iitalente ezincinci. ISan Francisco igcwalisa iitalente ezincinci ezinokunika imibono enomdla kakhulu okanye iimveliso. Aba bantu abancinci bahlala eSan Francisco kwaye eyona ndlela yokufikelela kubo kukuvula iiofisi esixekweni.
I-Apple ayisiyo nkampani yokuqala ukuvula iiofisi eSan Francisco. Iinkampani ezininzi kubandakanya uGoogle, Sele benoncedo esixekweni ngenjongo enye neApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple iya kuba neeofisi eSan Francisco, ezinabasebenzi abangama-500
Iimveliso ezilandelayo zika-Apple ziya kuba ngumbulelo ongaphantsi kweHZO
I-ACLU ikwaxhasa iApple kumlo wayo ne-FBI